Barcelona Oo U Bandhigeysa Kooxda Manchester United Xidigeeda Antoine Griezmann
Home Wararka Ciyaaraha Barcelona oo u bandhigeysa Kooxda Manchester United Xidigeeda Antoine Griezmann
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay tahay kooxdii ugu dambeysay ee Barcelona ay u soo bandhigto weeraryahankeeda Antoine Griezmann xagaagaan.
Kooxda reer Catalan ayaa la fahamsan yahay inay raadineyso inay iska iibiso 30 jirkaan, kaasoo haatan ah ninka ugu mushaharka badan kooxda, ka dib markii Lionel Messi uu si rasmi ah u noqday wakiil xor ah bishaan.
Madaxweynaha Barca Joan Laporta waxaa amar ku siiyay madaxda La Liga inay yareeyaan mushaarkooda ka hor ololaha 2021-22, si loo waafajiyo sharciga dhaqaale wanaaga.
Waqtigaan la joogo Sergio Aguero , Memphis Depay iyo Eric Garcia lama diiwaan gelin karo xilli ciyaareedka cusub, inkasta oo ay si bilaash ah ku yimaadeen, illaa ay kooxdu dheelitirto buugaagtooda.
Griezmann ayaa si aad ah loola xiriirinayay heshiis is dhaafsi ah oo ka dhigaya inuu ku laabto Atletico Madrid si uu ugu bedelo ciyaaryahanka khadka dhexe Saul Niguez .
Weeraryahanka ayaa sidoo kale la rumeysan yahay in loo soo bandhigay kooxaha Premier League, oo ay ku jiraan Manchester City iyo Chelsea , Daily Mirror ayaa warinaysa in United ay tahay kooxdii ugu dambeysay ee Barcelona ay la xiriirto.
Heshiiska Griezmann uu ugu biirayo kooxda Ole Gunnar Solskjaer , ayaa u muuqda mid aan macquul aheyn madaama Red Devils aysan diyaar u aheyn inay bixiyaan lacag weyn oo ku saabsan ciyaaryahanka reer France, halka sidoo kale ay mudnaanta siinayaan bartilmaameedyo kale, oo uu kujiro ciyaaryahanka Real Madrid Raphael Varane .
Previous articleChelsea ayaa isha la raaceysa laacibka AS Monaco Aurelien Tchouameni si uu badal ugu noqdo Declan Rice
Next articleCarlo Ancelotti oo diyaar u ah in uu Kooxda ku Hayo Gareth Bale